HDPE/PP/PVC kwụ ụdị okpukpu abụọ Wall corrugated Pipe extrusion Line - China HDPE/eyi/ịkwanyere kwụ ụdịdị Ugboro abụọ Wall corrugated Pipe extrusion Line Supplier, Factory –Jwell
HDPE / eyi / PVC kwụ ụdị Ugboro abụọ Wall corrugated Pipe Extrusion Line
HDPE/PP/PVC kwụ n'ahịrị extrusion eriri DWC nke Jwell mepụtara nwere ọtụtụ akwụkwọ ikike. Njikwa akpaka zuru oke, na -agba ọsọ, ike dị elu. Ihe HDPE/PP na -eji extruder screw otu dị elu na -arụ ọrụ nke ọma, ihe PVC na -ejikwa conical twin screw extruder ma ọ bụ ihe yiri abụọ ejikọrọ extruder. Igwe ahụ na-akpụzi nwere ụdị ụgbọ elu dị elu, sistemụ jụrụ mmiri mechiri emechi, mgbịrịgba dị n'ịntanetị. Kọmpụta PLC na -achịkwa ahịrị niile.
Pipe dayameta (mm)
Mmepụta PVC (n'arọ/h)
Mmepụta HDPE (n'arọ/h)
Oke ọsọ (m/min)
Jwell Ogwe osisi abụọ
Mpempe akwụkwọ Die Series-JW-B-CF
PC mpempe akwụkwọ extrusion Line